ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ဖိတ်ကြားတာကို မတက်ရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်မှုအပေါ် ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ် ကိုအောင်နေပိုင်နဲ့ RFA အမေး-အဖြေ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ဖိတ်ကြားတာကို မတက်ရောက်နိုင်တဲ့အကြောင်း ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်မှုအပေါ် ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ် ကိုအောင်နေပိုင်နဲ့ RFA အမေး-အဖြေ
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဒီကနေ့ ဇွန်လ (၇) ရက်နေ့မှာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေနဲ့ တွေ့ဆုံဖို့ ဖိတ်ကြားထားတာကို ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများအဖွဲ့ချုပ်နဲ့ မွန်ပြည်နယ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂတို့က တက်ရောက်နိုင်မှာ မဟုတ်သလို သူတို့အနေနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် စေလွှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကို မနေ့ညတုန်းက ကြေညာချက်အသီးသီး ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ဘာကြောင့် အခုလို ထုတ်ပြန်ရလဲ ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဗကသများအဖွဲ့ချုပ် ကိုယ်စားလှယ် ကိုအောင်နေပိုင်ကို ကျနော် ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာပါခင်ဗျာ။
RFA ။ ။ ကိုအောင်နေပိုင်ရေ … ဒီနေ့မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သမဂ္ဂကျောင်းသားတွေနဲ့ တွေ့မယ်ဆိုပြီး ဖိတ်ထားတဲ့ ဖိတ်ကြားချက်ကို ဗကသ အနေနဲ့ တက်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး ဆိုတာမျိုးပေါ့နော် ကြေညာချက်ထုတ်လာတာ တွေ့ရတယ်။ အဲဒါ ဘယ်လိုကြောင့်လဲ မသိဘူး။
ကိုအောင်နေပိုင် ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဇေယျာသော်ကနေပြီးတော့ ကျနော်တို့ကို လှမ်းဖုန်းဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော် … လှမ်းပြောတယ်။ ဒီမှာ ပညာရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ခြံထဲမှာ ဆွေးနွေးဖို့လို့ ပြောတယ်ပေါ့နော်။ ဒီဟာ တရားဝင် ဖိတ်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ ဒါ သီးသန့်တွေ့တာမျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ အဲဒါကြောင့်မို့လို့ ဖိတ်စာ ဘာညာတော့ လုပ်တာမဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့တချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်။ ကျနော်တို့ကို ပညာရေးဥပဒေနဲ့ ဆွေးနွေးတယ် ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲ လှမ်းပြောတယ်ပေါ့နော်။ လှမ်းပြောတဲ့အတွက် ကျနော်တို့အနေနဲ့က ပထမတချက်ကတော့ ဒီပညာရေးဥပဒေက ကျောင်းသားသပိတ် အဆက်အစပ်ကနေ ဖြစ်လာတဲ့ ပညာရေးဥပဒေဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့လည်း ကျောင်းသားသပိတ်တွေမှာ အောက်ခြေပါတီတွေကတော့ ၀န်းရံခဲ့ပေမယ့် အဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့ကတော့ ကျောင်းသားသပိတ်အပေါ်မှာ ဘာမှတုံ့ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိဘူး။ နောက် ကျောင်းသားတွေ တောင်းဆိုတဲ့ ပညာရေးဥပဒေအပေါ်မှာလည်း ဘာမှ ပြောကြားခြင်းမရှိဘူးပေါ့နော်။ နောက်တခုက လတ်တလောမှာဆိုရင် ကျောင်းသားသမဂ္ဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ အဲန်အယ်လ်ဒီရဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တဦးကနေပြီးတော့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂရဲ့ အခန်းဏ္ဍကိုတောင်မှ ပယ်ဖျက်ဖို့အထိ ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတွေ ရှိတယ်။ နောက် နိုင်ငံရေးပါတီတခုဖြစ်နေတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတခုကနေပြီးတော့ ဒီလိုဖိတ်ကြားမှုတခုကို လွတ်လပ်တဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂဖြစ်တဲ့အတွက် နိုင်ငံရေးပါတီတခုရဲ့ ဖိတ်ကြားမှုအတွက် ကျနော်တို့ အများကြီး စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော်။ နောက်တခုက လက်ရှိမှာ ကျနော်တို့ ရုံးထုတ်တွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဒီထောင်ဝင်စာတွေ သွားတွေ့နေရတဲ့အခြေအနေတွေ ရှိတယ်။ နောက် NNER ရဲ့ ကွန်ဖရင့်ပေါ့နော်။ ပညာရေးညီလာခံအတွက် ဗကသအနေနဲ့လည်း ပြင်ဆင်ပေးနေရတဲ့ အပိုင်းလေးတွေလည်း ရှိတယ်ပေါ့နော်။ အဲဒီအချက်တွေကြောင့် ကျနော်တို့ ဒီအစီအစဉ်ကို ငြင်းပယ်လိုက်တာပေါ့။
RFA ။ ။ ဖိတ်တာက ဒါ ဦးဇေယျာသော်ကပဲ တယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်ပြီး ဖိတ်တာပေါ့။
ကိုအောင်နေပိုင် ။ ။ ဟုတ်ပါတယ်ဗျ။ ဟုတ်ပါတယ်။
RFA ။ ။ အဲတော့ နေပြည်တော်မှာ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ကော်မတီဆွေးနွေးပွဲကို ခင်ဗျားတို့ လေ့လာသူအနေနဲ့ သွားတက်တုန်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ တွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်။
ကိုအောင်နေပိုင် ။ ။ နေပြည်တော်မှာ သွားတွေ့တုန်းကလည်း တကယ်တမ်းကျတော့ ကျနော်တို့သမဂ္ဂတွေကို ဖိတ်တာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့သမဂ္ဂတွေကို အသိအမှတ်ပြုတာမျိုး ဖိတ်တာမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ ကျနော်တို့ကို ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေက အခွင့်ထူးခံတွေမဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ပြောတာ ကျနော်တို့ တွေ့ရတယ်။ အဲတော့ ကျနော်တို့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေက တကယ်တမ်းကျတော့လည်း အခွင့်ထူးခံမဟုတ်ဘူး။ ကျောင်းသားသမဂ္ဂဆိုတဲ့ အခန်းကဏ္ဍတခု ဖြစ်ပေါ်လာရေးကို ကြိုးပမ်းနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ နောက် ပညာရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးတဲ့နေရာမှာလည်း လေးပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုက ရလာတဲ့ အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်တဲ့ ဥပဒေအပေါ်မှာ ဆွေးနွေးနေတာမျိုး မတွေ့ရဘဲနဲ့ သာမန်ပညာရေးဥပဒေပုံစံမျိုး ဆွေးနွေးနေတာမျိုး တွေ့ရတဲ့အတွက် ပြောချင်တာက ကျောင်းသားသပိတ်တွေကြောင့် ဖြစ်လာတဲ့ လေးပွင့်ဆိုင်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးက ပေါ်လာတဲ့ ပညာရေးဥပဒေကို သဘောတူညီထားတဲ့အချက်တွေကိုရောပေါ့နော် အဲဒါတွေအားလုံးကို ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အစ ကျောင်းသားသပိတ်ကို လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ ပုံမျိုးတွေ တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်။ ဒီအချက်တွေကြောင့်လည်း ကျနော်တို့က တက်ရောက်နိုင်ခြင်းမရှိတာလည်း ပါပါတယ်။
RFA ။ ။ အဲလိုဆိုလို့ရှိရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နောက်တခါ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပေါ့နော် အဲလိုအင်အားစုတွေနဲ့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂအင်အားစုတွေကြားထဲမှာ ဆက်ဆံရေး အေးတိအေးစက်တွေ ဖြစ်နေပြီလို့ ပြောလို့ရမလား။
ကိုအောင်နေပိုင် ။ ။ အဓိက က အေးတိအေးစက်ဖြစ်တယ် ဆိုတာထက် တချက်ကတော့ ကျနော်တို့ ပြန်ပြီးတော့ သုံးသပ်ဖို့ လိုလာတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်လာတာပေါ့။ ကျနော်တို့ကိုယ်တိုင်က ပထမ စတဲ့ အခြေအနေမှာ အခု သမဂ္ဂကိုယ်စားလှယ်လိုဟာမျိုးမှာ ဒီအာဏာရနေတဲ့ ပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကတောင်မှ သမဂ္ဂအခန်းကဏ္ဍမျိုးမှာ သူတို့လည်း သမဂ္ဂကို မလိုလားဘူး၊ မှေးမှိန်အောင် လုပ်နေတာတော့ အမှန်ပဲ။ ဒါ ကျနော်တို့လည်း သိနေတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ အတိုက်အခံဘက်ကနေပြီးတော့ သမဂ္ဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ဖြုတ်ပေးဖို့ တောင်းဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။ ဒါတွေကလည်း ကျနော်တို့ ကြုံရတယ်။ နောက် ဒီကြားထဲမှာ တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍမျိုးမှာလည်း တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အသံတွေကို လျစ်လျူရှုပြီးတော့ မိမိတို့ပါတီတခုရဲ့အသံမျိုးကို ထုတ်နေတာမျိုးတွေလည်း ရှိတယ်။ အဲတော့ ကြာလာရင်တော့ ဒီအဟက ပိုကျယ်လာမယ်လို့ မြင်တယ်။ အဲတော့ ကျနော်တို့ ဖြစ်စေချင်တာက ဒီလိုသမိုင်းကြီးတဲ့ သမဂ္ဂဆိုတဲ့ အဆိုတခုကို ဘယ်လိုရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် တင်သွင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ ကျောင်းသားသမဂ္ဂတွေကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ ခွပ်ဒေါင်းအလံတော်ကို ယူထားတဲ့ အဲန်အယ်ဒီပါတီအနေနဲ့ ကျောင်းသားတွေကိုတော့ ပြန်လည်ပြီးတော့ အဲဒီ သူတို့ဘက်က ဖြုတ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့ ပြန်လည်ဖြေရှင်းဖို့တော့ လိုလာပြီပေါ့နော်။ အခုဟာက ဘယ်လိုဖြစ်နေတုန်းဆိုတော့ အဲဒီဟာတွေကို ဖုံးကွယ်ဖို့ ကြိုးစားရင်းနဲ့ သူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ ပုံစံတွေ ချချပြပြီးတော့ ကျောင်းသားတွေ ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာတွေကို နားမထောင်တာတွေကိုလည်း တွေ့နေရတယ်ပေါ့။ ဒါ လုံးဝမဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့နော်။ သူတို့ ဖြစ်ချင်တာ ဒီပုံစံရှိတယ်။ ကျနော်တို့ ဖြစ်ချင်တာ ဘယ်ပုံစံရှိတယ် ဆိုတဲ့ ကျနော်တို့ကို ဆွေးနွေးခွင့်ပေးရမယ့်ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့ သူတို့ဖြစ်ချင်တာတခုတည်းကိုပဲ ဆွေးနွေးနေတာမျိုး ဆိုရင်တော့လည်း တဘက်ပိတ်ဆွေးနွေးမှုပဲ ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်။
RFA ။ ။ ဟုတ်ကဲ့ ဟုတ်ကဲ့ ကိုအောင်နေပိုင် ဟုတ်ကဲ့။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ အခုလို ပြောပြတာ။
(ဓာတ်ပုံကို aung nay paing ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာမျက်နှာမှ ရယူပါသည်။)
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 3:09 PM
daw su should listen and support or atleast not against the oppositional forces whatever platform they come from. don't loose your focus on common enemy.
you can deal the differences once you reached your goal.